Karoorri Iccitii sakatta’insa WBO saaxilame! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKaroorri Iccitii sakatta’insa WBO saaxilame!
Raayyaa Ittisa Biyyaa, humna waraana Shaabiyaa (Eertiraa)Humna Addaa Naannoo Amaaraa, loltootni farra riphee loltuu federaalaa,Humni Addaa Naannoo Oromiyaa fi milishaan duula sakatta’insa WBO Oromiyaa keessaa irratti argamu. Duulli kun hanga Ebla 17, 2013 ALHtti turuun baramee jira. Yeroo kenname kana keessatti WBO Lixaa fi Kibba Oromiyaa keessaa qulqulleessuun karoora armaan gadiin raawwatama. Karoorri kun marii aangawoota RIB,Federaalaa fi Humna Addaa Oromiyaan bakka Baacaa Dabalee argamutti xumuramee tika biyyoolessaa fi Abiy Ahmed dhaaf gabaasaan galee jira
1. Ebila 06 hanga 08, 2013 ALHtti miseensotni poolisii federaalaa farra riphee loltuu jedhaman bakka murteessaa (Strategic Location) tahe ni qabatu. Uummatni akka odeeffannoo hin arganneef burjaajeessuuf RIB fi humni waraana Shaabiyaa akkasumas Humni Addaa Oromiyaa magaalaa aanaalee keessa qubatu. Kun humna biraa dhoksaan ganda qabachaa jiru haguuguuf tahe jedhamee hojjetama. Humni Addaa Oromiyaa ganda irratti argamu hundi gara aanaatti deebi’a.
2. Ebla 09 fi 10, 2013 ALHtti Raayyaan Ittisa Biyyaa gara gandaatti sochii eegala. Malkaa fi daandiin Wallaggaa keessaa gara Shawaatti geessu hunduu banaa ni taasifamu. Jimmaa keessaa gara Shawaa Lixaa kan geessan hunduu banaa tahu. Kunis WBO Wallaggaa,Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa gadhiisee gara Shawaa Lixaa akka seenuufi dha. WBO daandii bal’aa kana hin fayyadamne farra riphee lolaa federaalaatti waan dhufaniif rukkutuuf karoorfame.
3. Karoora kana milkeessa jedhamee kan yaadame miseensotaa fi deeggartootni akkasumas maatiin miseensota
WBO hidhaa jiran hidhaa keessaa baafamanii bakka WBON keessa socho’u, nyaatu akka waraanatti agarsiisaniif Godinaalee hunda keessaa hidhaatii baafamanii harka RIBtti argamu.
4. Lola itti fufaa torban tokkoof Ebla 11 hanga 17, 2013 ALHtti turuun Wallaggaa keessaa WBON baqatee Shawaa Lixaa gala jedhamee yaadame. Shawaa Lixaa akka galeen humna qilleensaa, RIB Iizii gidduu galeessaa, Iizii Lixaa,Republican Guards, Poolisii federaalaa fayyadamuun itti marsanii fixuuf karoorsan.
5. Karoora kanatti gufuu taha,uummatnis tahe WBOn dammaqinsaan waraanatti seena jedhanii kan yaadan hojjetanii jiru. Innis miseensotni humna addaa Oromiyaa sakatta’insa gandaa dhaabee magaalota aanaa akka eegu, humni addaa Naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa jiraachuun waan barameef uummatni lolatti akka hin seenne jedhamee Oromiyaa keessaa bahee jira. Hooggantoota hafaniif uffatni reenjerii RIB kennamee jira.
Atis Of qopheessi.share Gochuun WBO bukkeen gaha.